E-Export - Tanga E-Export nePropar Ikozvino!
Tora chikamu chako chemisika mikuru yeEurope inotengesa mamirioni makumi mana nemasere pazuva.
Turkey chete uye nyika inotungamira E-EXPORT mhinduro
Dzvanya, enzanisa, ONA mutsauko.
E-Export neE-commerce Saiti
96% yee-commerce saiti yakavhurwa muTurkey yakavharwa mugore rekutanga.
Paunotanga e-kutumira kunze neakaderera-maitiro e-commerce mapakeji, iwe unenge uri wega mune ese maitiro.
Yegore e-commerce kutengesa kwePropars vatengesi vari kukura ne300%.
E-kutumira kunze nePropars
Vese avo vakatanga e-kutumira kunze nePropars vakatengesa kunepasi mugore rekutanga. 64% yeavo vakagamuchira maPropars 'emahara ekutanga ebasa rebasa vakatanga e-kutumira mumwedzi mitatu yekutanga.
Iko kutengesa kwevashandisi vanotengesa kune matatu kana kupfuura emisika misika inowedzera ne3%.
Sarudzo yemabhizimusi e1500 + maPropars.
"Unogona kubatanidza yako e-commerce saiti kana erp accounting chirongwa kuPropars uye kuwedzera e-export chimiro. Zvakakosha kutarisira sezvazviri kutengesa"
Kutanga E-Export nePropars mune Matanho Matatu
Propars anovhura ayo zvitoro kwauri mahara pamapuratifomu aunoda kutengesa.
Iyo inokutendera iwe kuti utore yakasarudzika mitengo yakaderedzwa kubva kumakontrakiti emakambani enhumbi uye kuita nyore kutakura.
Zvigadzirwa zvaunoisa kuPropars zvinotengeswa munyika dzaunoda.
NePropars, tanga kutengesa nekudzvanya kumwe chete mumisika yepasi rose seAmazon, Ebay, Allegro, Wish uye Etsy!
Unganidza maodha ako ese pachiratidziro chimwe, invoice nekudzvanya kumwe chete! Iwe unogona kuburitsa e-invoice muhuwandu hweodha yako kubva kumisika uye neyako e-commerce saiti uye kudhinda fomu rakawanda rekutakura zvinhu.
Kutenga kubva kumisika panzvimbo pevatengi zvakavanzika e-commerce saiti
Pamusoro gumi zvikonzero nei
Pamusika VatengiE-Commerce Saiti Vatengi
Yekutakura yemahara sarudzo
Inonzwisisika mutengo mutemo
Inoshanda uye nyore kutenga
Kuenzanisa kwemutengo nzvimbo
Kunzwisisa kwechinyakare kwekutengeserana kwasiya nzvimbo yayo kune e-commerce. Nekudaro, e-commerce haingogonese iwe kuti usvike kumaguta ese enyika yako. Panguva imwecheteyo, nyika dzinopa mukana wekuyambuka makondinendi. Ne e-export, unogona kuendesa zvigadzirwa zvako kune vako vangangove vatengi kupi zvako munyika.
Misika yepasirese ikozvino ihombe uye chaiyo yekutenga nzvimbo uko vatengi vese pasirese vanosangana. Kuvhura chitoro pamapuratifomu aya zvinoreva kuve nebhizinesi richashanyirwa nenyika yese.
Kunyangwe e-export yave nemukurumbira zvakanyanya, kunyanya nebasa rekuchinjana kwekunze mumakore achangopfuura, mabhizinesi ane kumwe kusagutsikana nezvenyaya iyi.
Chekutanga, maSME edu, asina ruzivo rwakakwana, anofunga kuti haakwanise kubata nekutengeserana uku. Mabhizinesi makuru, kune rumwe rutivi, ane matambudziko mukutora matanho akakodzera.
Nekudaro, software inotsigira, zvinokurudzira zvehurumende, masevhisi ekubhadhara, masevhisi ekugadzirisa zvinhu anogadzirwa zvakanyanya. Ikozvino, chero chiyero kana chigadzirwa chebhizinesi, e-export inogona kutanga nekukurumidza uye nyore.
Propar ndiye mhinduro mubatsiri wemapuratifomu epasi rose muTurkey. Nesoftware yedu yepamusoro uye timu yehunyanzvi, tinounza akawanda uye akawanda emabhizinesi edu kune e-export.
NeE-Export Kuwana Nemari Yemari
Iyo lira yeTurkey yakatevera kuchinjika chati mumakore achangopfuura uye zvinosiririsa yakaona kudzikira kwakanyanya. Nekudaro, pane nzira yekushandura mamiriro aya kuita mukana.
Kutengesa zvigadzirwa zvako nekutenda mitengo yekuchinjana kunobvumira zvigadzirwa zvako kuwana kukosha muTL. Zvigadzirwa zvaunogadzira muTL muTurkey zvinotengeswa kunze kwenyika nemari dzakaita seUSD, euro uye sterling. Nenzira iyi, iwe uchawedzera purofiti yako ne-e-export. Besides; Ichi chingori chimwe chezvakanakira e-exporting.
Kutakura kwako mukati mechikamu che micro export hakuna mutero muTurkey. Uyezve; Kana iwe wakabhadhara chero VAT uchitenga chigadzirwa ichi, zvinokutendera kuti udzose mari iyi.
Kupatsanura kutengeserana kwako mumatanho akawanda nemitengo yekuchinjana kunopa yakachengeteka mari modhi yebhizinesi rako. Uye inokudzivirira kubva pakuchinja-chinja kwemusika wepamba.
Kutengesa Munyika Yose
Nekushandiswa kwakapararira kweinternet, nyika yave pasi rose uye, neimwe nzira, yakaderera. Mafambo haasi kure zvakadaro. Bhizinesi muTurkey rinogona kusuma chigadzirwa charo nyore kune vangangove vatengi mune imwe kondinendi uye rinogona kuendesa nekukurumidza kana odha yagamuchirwa.
Haufanire kufunga kuti vangani vanhu vaunogona kutengesa chigadzirwa chaunogadzira muguta rako pachako kana nyika. Mubvunzo wakakosha ndewokuti; vanhu vangani munyika vaungatengesera.
Wadii kuyambuka miganhu iwe uchikwanisa kusvika pasi rose?
Bata nesu izvozvi!